R & D kugona - Didlink Boka Co, Ltd.
Impact Notch Detector
Wall Ukobvu Bvunzo
FET Helium mass spectrometer inodonha kuona
DIDLINK GROUP ine yakazara seti yemhando yepamusoro yekuyedza michina uye nzira dzekuyedza kudzora chigadzirwa kubva paMhando kubva kune yakaoma kukanda kana kuumba kune chapera chigadzirwa. Uchishandisa yakakwenenzverwa kukanganisa kutadza, kuongorora kwemavara, kuongorora kwemagineti, kuongorora kwechitarisiko, bvunzo yekukanganisa, bvunzo yekuoma, dhijitari bvunzo moto bvunzo, yakanyanya-yakadzika tembiricha bvunzo, yakanyanya kumanikidza bvunzo, yakadzika leakage bvunzo, kuyedza kuzere kwezvigadzirwa senge mweya kumanikidza uye kumanikidza kwemvura bvunzo.
Iyo kambani iSinopec, CNOOC network yekuwana bhizinesi, uye yenyika yepamusoro-tech bhizinesi. Zvakatorwa Got IS0 9001, ISO 14001, ISO 18001, TS, Apl 607, API 6D, API 6A, Apl 16C, API 6FA, CE, nezvimwewo Chitupa chekumisikidza hunhu system yekusimbisa kuti ive nechokwadi chehunhu hwechigadzirwa uye kuvimbisa mabhenefiti emushandisi.
Yakadzika Kupisa Bvunzo
DIDLINK GROUP yakagadzira yakaderera tembiricha, yakanyanya tembiricha. Iyo tembiricha bvunzo kamuri iri manhamba inodzorwa bvunzo zvigadzirwa kufukidza bhora mavharuvhu, magedhi mavharuvhu, shavishavi mavharuvhu, globe mavharuvhu, tarisa mavharuvhu nezvimwe zvigadzirwa. Zvishandiso zvese zvinogona kunyora nekudhinda pa-saiti kuyedza data ku chengetedza chinangwa, chechokwadi uye chinotsvagika chekuyedza dhata kudzoka shure.
Chikamu chekusimudzira seicho chinangwa Kuongorora
Yakakwirira tembiricha bvunzo
Maitiro ekuyedza rarama
Stainless simbi Ball mavharuvhu, Ndarira Ball Valve, Chiwanikwa Steel Ball mavharuvhu, Bronze Bhora Valve Ine Ptfe Zvigaro, Utsanana Stainless Steel Ball Ball mavharuvhu, Stainless simbi Ball Valve,